Silver Sulfadiazine (ဆေးလ်ဗား ဆာလဖာဒိုင်ရာဇင်း) - Hello Sayarwon
Silver Sulfadiazine (ဆေးလ်ဗား ဆာလဖာဒိုင်ရာဇင်း)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Silver Sulfadiazine (ဆေးလ်ဗား ဆာလဖာဒိုင်ရာဇင်း)
Silver Sulfadiazine (ဆေးလ်ဗား ဆာလဖာဒိုင်ရာဇင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Silver Sulfadiazine (ဆေးလ်ဗား ဆာလဖာဒိုင်ရာဇင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Silver Sulfadiazine (ဆေးလ်ဗား ဆာလဖာဒိုင်ရာဇင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Silver Sulfadiazine သည် Sulphonamide (ဆာလ်ဖိုနမိုက်) အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဆဲလ်အပြင်ဘက်အလွှာရှိ ပိုးမွှားများကို သေစေနိုင်ပါသည်။
Silver Sulfadiazime ကို မီးလောင်မှုအဆင့် ၂ နဲ့အဆင့်၃ ဒဏ်ရာများတွင် ပိုးသေစေရန်အသုံးပြုသည်။ အခြား သော အခြေအနေများတွင်လည်း အသုံးပြုမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Silver Sulfadiazine (ဆေးလ်ဗား ဆာလဖာဒိုင်ရာဇင်း) ဘယ်လိုအသုံးပြုသင့်သလဲ။
ဆေးကိုအသုံးမပြုမီ လက်ကိုစင်ကြယ်စွာဆေးပါ။ သန့်ရှင်းသောလက်အိတ်ဖြင့် ထိခိုက်သောနေရာသို့ ၁.၅၈ မီလီမီတာ အထူ ခန့်လိမ်းပါ၊ လိုအပ်လျှင် ထိခိုက်သောနေရာသို့ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Silver Sulfadiazine အသုံးပြုပြီး ပတ်တီးစည်းရန်မလိုပါ။ သို့သော် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာရပါမည်။
ရောဂါပိုးမွှားများ အရှင်းသေစေရန် မိမိရောဂါသက်သာလာသည့် တိုင် Silver Sulfadiazine ကို သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်အတိုင်းအပြည့်အဝအသုံးပြုရပါမည်။
Silver Sulfadiazine (ဆေးလ်ဗား ဆာလဖာဒိုင်ရာဇင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Silver Sulfadiazine ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Silver Sulfadiazine ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Silver Sulfadiazine ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Silver Sulfadiazine (ဆေးလ်ဗား ဆာလဖာဒိုင်ရာဇင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ။
မိမိတွင်ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အစီအစဉ်ရှိလျှင် နို့တိုက်မိခင်ဖြစ်လျှင်
မိမိသည် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်ဖြစ်စေ မညွှန်ကြားထားသည်ဖြစ်စေ ဆေးဝါးများသုံးစွဲနေလျှင်-ဆေး အစားအသောက် နှင့်အခြားဓါတ်မတည့်မှုများရှိလျှင်
ယခုဆေးဝါးတွင်ပါဝင်သောပစ္စည်းများနှင့်ဓါတ်မတည့်မှုများရှိလျှင် ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်ပြောရပါမည်။
Silver Sulfadiazine သည် လိမ်းဆေးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ မျက်စိ၊ နားနှင့် ပါးစပ်ထဲသို့မဝင်အောင် အထူးဂရုပြုရပါမည်။ ဝင်သွားသည် ရှိသော် ရေနှင့် ခက်ချင်းဆေးရပါမည်။
Silver Sulfadiazine သည် မြိုချ၍ မရပါ။ မြိုချခဲ့သည်ရှိသော် ချက်ချင်း အဆိပ်အတောက်ဆိုင်ရာ အရေးပေါ် ဌာနသို့အလျင်အမြန်သွား ရပါမည်။
မိမိ၏ရောဂါလက္ခဏာဆိုးရွားလာလျှင် မိမိဆရာဝန်နှင့် အလျင်အမြန်ဆွေးနွေးပါ။
Silver Sulfadiazine သည်ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှား ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများအတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများအတွက် အသုံးမဝင်ပါ။
Silver Sulfadiazine ကိုဆေးပတ်လည်အောင် အသုံးပြုရပါမည်။ ထိုသို့အသုံးမပြုပါက ဆေး၏အကျိုးအာနိသင်ကို ထိခိုက်နိုင်သည့်အပြင် နောင်တွင် ထိုဆေးသုံးသော အခါများတွင်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းနိုင်ပါသည်။
Silver Sulfadiazine ကိုကြာရှည်စွာ စွဲ၍သုံးလျှင်လည်း ရောဂါထပ်တိုးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်ပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ထပ်လောင်းရောဂါအတွက်ဆေးဝါးများပေးပါလိမ့်မည်။
အသက် ၂လ အောက်ကလေးများတွင် မသုံးသင့်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Silver Sulfadiazine (ဆေးလ်ဗား ဆာလဖာဒိုင်ရာဇင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Silver Sulfadiazine (ဆေးလ်ဗား ဆာလဖာဒိုင်ရာဇင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Silver Sulfadiazine ကိုသုံးနေစဉ်ကာလအတွင်း
လိမ်းထားသည့်နေရာတွင် ယားခြင်း ၊ နီခြင်း၊ ပူခြင်း၊ နာခြင်း
ဓါတ်မတည့်သော လက္ခဏာများ (အနီကွက်ပေါ်ခြင်း၊ ယားခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ ပါးစပ် နှုတ်ခမ်း နှင့် လျှာ တို့ရောင်လာခြင်း)
ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း နှင့် ချောင်းဆိုးခြင်း
အသားနီခြင်း၊ ယောင်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုပေါက်ခြင်း၊ အသားလန်ခြင်း
အသည်းရောဂါ၏ လက္ခဏာများဖြစ်သော အသားဝါခြင်း၊ ဆီးရောင်ရင့်ခြင်း၊ ဝမ်းရောင်ဖျော့ခြင်း၊ အစာအိမ်နာခြင်း၊ မူးမောခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း
မကြာခဏ သွေးခြေဥခြင်း နှင့် သွေးထွက်ခြင်း
နှုံးချိခြင်း နှင့် အားမရှိသလိုဖြစ်ခြင်း တို့ရှိလျှင် ဆရာဝန် နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Silver Sulfadiazine (ဆေးလ်ဗား ဆာလဖာဒိုင်ရာဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Silver Sulfadiazine ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Silver Sulfadiazine (ဆေးလ်ဗား ဆာလဖာဒိုင်ရာဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Silver Sulfadiazine က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Silver Sulfadiazine (ဆေးလ်ဗား ဆာလဖာဒိုင်ရာဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Silver Sulfadiazine ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
Glucose-6-phophatase dehydrogenase ဓါတ်ချို့တဲ့သောရောဂါ
သွေးနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါ (သွေးအားနည်းခြင်း၊ သွေးဖြူဥနည်းခြင်း) ဖြစ်ပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Silver Sulfadiazine (ဆေးလ်ဗား ဆာလဖာဒိုင်ရာဇင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အပူလောင်ပြင်းထန်မှုအဆင့် ၂ နှင့် ၃ အခြေအနေများအတွက် ကာကွယ်ရန် နှင့်ကုသရန် အသုံးပြုကြပါသည်။ ဖြစ်သောနေရာသို့ တစ်နေ့ ၂ကြိမ် မှ ၃ကြိမ် အထိလိမ်းနိုင်ပါသည်။ အထူ ၁.၅၈ မီလီမီတာ လောက်ဆို အနေတော်ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သည့်နေရာသို့ထပ်တစ်ကြိမ် လိမ်းနိုင်ပါသည်။ ရေနှင့် အနာကို သန့်စင်ပြီးပြီးချင်းလိမ်းနိုင်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Silver Sulfadiazine (ဆေးလ်ဗား ဆာလဖာဒိုင်ရာဇင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Silver Sulfadiazine (ဆေးလ်ဗား ဆာလဖာဒိုင်ရာဇင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
၅ ဂရမ် ၁၀ ဂရမ် လိမ်းဆေးဘူးများ
၁ ရာခိုင်နှုန်း အမှုန့်များ အနေနှင့် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
Silver Sulfadiazine ကို အသုံးပြုဖို့မေ့သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာပြန်အသုံးပြုပေးပါ။
Silver sulfadiazine. http://drugs-about.com/drugs- m/morihepamin.html. Accessed December 13, 2016
Silver sulfadiazine. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-13530/silver- sulfadiazine-topical/details#side-effects. Accessed December 13, 2016